Ogaden News Agency (ONA) – Xaflad lagu maamusay sanadguurada JWXO iyo San Diego
Posted by ONA Admin	/ September 9, 2013
San Diego: Maalintii Axada ee 8dii bisha September, 2013 ayaa Jaaliyadda Somalida Ogadenia ee ku dhaqan magaalada San Diego iyo nawaaxigeeda isugu yimaadeen shirweyne loogu dabaal dagayo sannad guuradii 29aad ee aas-aaskii Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia (JWXO).
Shirkan ayaa waxaa lagu xusay taariikhda sooyaalka ee Soomaalida Ogadenia gaar ahaan taariikhda JWXO iyo waliba marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay jabhadda iyo halganka shacabka S.Ogadenya. Waxaa shirkan khadka isgaarsiinta ee la iska arko uga qaybgalay Wakiilka Mareykanka ee Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia mudane Axmed Majeerteen. Waxaa kale oo munaasabadan isna ka hadlay Mudane Axmed Cali Yusuf oo ah xubin ka mid ah golaha dhexe ee Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia.
Shirkan oo ay kasoo qaybgalay dhamaan qaybaha kala duwan ee Jaaliyadda sida Ururka dhalinta, ururka haweenka, odayaasha, culimada diinta iyo dhamaan taageerayaasha halganka xaqa ah ee Soomaalida Ogadenia ayaa waxaa furitaankii shirka sidii caadadu ahayd lagu furey aayadaha Quraanka kariim iyo muxaadaro uu soo jeediyey Sheekh Xussein oo ku baraarujiyay dad weynihii ineysan marna unuglaanin cadowga.
Shirkan oo uu xidhiidhinayey guddoomiyaha Jaaliyadda Ogadenia ee San Diego Mudane Cabdinasir Cabdullahi Faarax ayaa wuxuu cod-baahiyaha kusoo dhaweeyey mudane Cabdiqadir Colaad oo isagu ka hadlay aas-aaskii JWXO iyo marxaladihii ay soo martay, waxaa kale oo uu mudanuhu ka hadlay sababta ku khasabtay iney JWXO qori qaadato kadib markii ay maamulka Tigreegu ka baxeen balaantii ay wada galeen ee ahayd in shacabka afti laga qaado labada sano ee cahdigii (Transitional Charter)ka ka dib.
Waxaa kaloo isna khudbad isugu jirtay taariikh iyo guubaabo kasoo jeediyey madasha halgamaaga weyn ee Cabdullahi Cumar Feen. Wuxuuna ku baraarujiyey dad weynihii iney dulmiga iyo gumeysiga iska dulqaadaan, naftooda iyo maalkoodana uhuraan halganka xaqa ah ee ka socda Ogadenia.
Intaa kadib ayaa Wakiilka Mareykanka ee JWXO mudane Axmed Majeerteen lagu soo dhaweeyey isaga oo dad weynaha kala hadlayey khadka isgaadhsiinta ee la iska arko. Wuxuu mudanuhu ka hadlay marxaladda uu halganku maanta marayo, kalfadhigii u dambeeyey ee Jabhadda Waddaniga iyo go’aanadii kasoo baxay iyo waliba marxaladaha cusub ee kusoo wajahan.
Waxaa isna goobta khudbad gaaban kasoo jeediyey Mudane Maxamednur Maxamud Cabdi Heybe oo ah guddoomiyaha ururka dhalinyarada OYSU fariciisa California oo isagu ka hadlay doorka dhalinyarada iyo sidii ay hormuud ugu noqon lahaayeen shacabkooda.
Munaasabadan ayaa waxaa lagu soo xidhay farxad, rayn rayn iyo jawi aad u qurxoon.